Gasy malala ! – MyDago.com aime Madagascar
Gasy malala !
Gasy Malala a ! Izaho anie tsy niova fa mbola jiolahimboto, hatramin’izao anie dia mbola miteny maloto. Tsy nanan-piovana na dia efa lahiantitra ho 51 taona rahampitso aza. Tsy mba nahita andro nihiratra ianareo ankohonako. Ankehitriny dia « ny rafilahy » no mibaiko amin’izay tokony hitondrako antsika mianakavy. Lany andro mifanadala sy mifanenjika, mifamingana ary mitady ny fomba rehetra hisehosehoana fotsiny aho, mahatsapa ho kivy tanteraka aho amin’ny manjo anao ry Gasy malala kanefa tsy manaiky ho resy dohika aho, tsy mihevitra ny hampandefitra ny « reharehako » . Tsy afaka eo ambavako ny teny maloto, teny feno fandrahonana, tenin’ny fieboeboana…Toa fantatro ihany fa ireo no fositra tsy mampiova ahy, kanefa tsy ahoako ny « tabataban-dry Zalahy ». Mahamenatra satria toy ny fatàka resy lava, tsy manana hazondamosina, tsy mety ho afa-trosa. Isan-kariva dia ozon-beran’ny sasany no mba mahamamo ahy. Gasy malala ô ! Na dia sarotra tokoa aza ny lalana (mety ho izaho ve no nahasaotra azy ?) tsy maintsy hizorantsika da tsy maintsy ho entiko any ianao, na dezaka sy tany foana aza dia tiako ny mampanantena anao ny « tsy misy ».
Hatramin’izao ny akanjoko dia mbola rovi-damba, izaho dia tsy niova…Tsy mety ho olo-mihaja. Mba fantatrao moa ry Gasy malala fa tsy manana afa-tsy 234 dolara isan-taona aho mba hamelomako anao ? Tena « catastrophe » anie hono, izany hoy ny solontenan’ny firenena mikambana eto amintsika e ! 38.000 no isan’ny kilonga tsy afaka mianatra intsony, ary ny antsasak’ireo tsaiky eto amin’ny tanàna dia zara raha mimonjy sy mikaly. Tena tantara ratsy, sy mbola mampiteny ratsy, saingy tsy any no olana fa tsy maintsy mba mi-parady aho sy ny fitaovana vaovao mba hamonoko lolo ny « rafiko ». Manam-pitaovana hiarovana ny « hadalako » aho, ka na mpanasitrana (ilay mitetika ny hitondra vonjy aina), na mpitondra fivavahana (ilay taritin’izy 4 mitsam), na ny mpifanolo-bodirindrina (soloin’ilay dokotera tonga eto tena), na ny mpiana-kendry ho mpahay mandamina ny fiaraha-monina, na iza na iza(?) dia hodiako fanina fa leo « tori-teny » lavareny sy mampatory am-pitsanganana aho. Aiza ho aiza moa ny misy antsika izao ? Moa tsy mbola eto an-tampon’Isamireraka ihany ? Moa tsy mbola samy variana toy ny hatrizay ihany ? Tena fanambadiam-bolavo tokoa ka samy mikepoka izay hitany. Samy manondro ny tiana aleha ka tsy hitan’ny ankizy intsony izay tokony hodiavin’ny tongony. Tsy samy mandeha, samy mitady intsony..fa efa nihoarantsika ela izany : Samy mitrifana, samy mandady. Ary mandady amin’ny manjoko !
Gasy malala ô ! Mbola ho lavitra ny dingana tsy maintsy hizorantsika, fantatro fa ny vavahady dia mirindrina, tsy maintsy mbola hirediredy aminao indray aho amin’ny tonon-taona manaraka. Tsy maintsy ho toy izao ihany aho satria tsy mbola mivonona ny hiova, ary tsy te-hiova. Iniako tsy henoina intsony ireny hirahira mamintsika ireny : « Ny fitiavanay tsy miala fa ho anao ho doria tokoa, he ! Sambatra tokoa izahay ». Tsy misy mihevitra an’izany re ry Gasy malala a ! Toky am-pasana sy voatery natao ireny satria mba te-ho toy ny olon-drehetra teto an-tany anie isika e ! Mba aiza moa ny olona niara-nianga tamintsika ? Na ny zandritsika tato aorina rehetra ? Haiko izany ry Gasy malala, fa izaho anie ho’a tsy hiova e ! Ny tadim-poitrako aza mbola tsy tapaka, mbola minono amin-dreny.
Auteur Ony RambeloPublié le 25 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
2 pensées sur “Gasy malala !”
Very fanahy mbola velona ny malagasy tsy vaky volo
Fa na ny manangana drapeau aza tsy misy intérêt na ny pitiny aza
Miarahaba tratrin’ny taona 2011 tpokomo sady mivavaka mba ho tafin’ny Tompo ny heriny isika amin’ity taona vaovao ity.Fangatahana : azonareo hatao ve ny manoma ahy amin’ny alalan’ny adiresy e-mail na mampiditra ato amin’ity site ity ny FJKM AMBAVAHADIMITAFO ireo teny maro nataon’ny mpanompon’Andriamanitra momba an’i pasteur Tovo tamin’io fotoana nahatsiarovana azy tamin’ny asabotsy 18 /12/2010 io . Raha misy sary moa na feo dia vao maika tsara.Misaotra mialoha tpokomo.
Précédent Article précédent : Escroquerie !
Suivant Article suivant : Fitondrana Avon’ny Tetezamita